Sharmake oo booqdey xeryaha qaxootiga Dhadhaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ra’iisal Wasaaraha Dowladda Soomaaliya Cumar C/rashiid ayaa markii ugu horeysay booqanaya xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee W/Bari dalka Kenya, kaddib markii uu shalay ka wuxuu bilaabay booqashooyin uu ku tegayo, qaar ka mid ah dalalka ay ku sugan yihiin qaxootiga Soomaalida ah oo Kenya ay ka mid tahay.
Garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Muqdisho waxaa shalay gelinkii dambe ka ambabaxay wafdi uu hoggaaminayo Ra’iisal Wasaaraha Soomaaliya, kuwaasi oo ka degay magaalada Nairobi ee wadanka Kenya isla markaana waxay booqanayaan xeryaha qaxootiga Dhadhaab gobolka W/Bari ee dalkaasi si ay ugu kuur galaan xaaladda halkaasi ka jirta.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa warar kale oo soo baxaya waxay sheegayaan inuu booqanayo Jasiirada Malta, halkaasi oo ay ku dhammaanayaan tahriibayaal Soomaali ah, iyadoo socdaalka Ra’iisal Wasaare Cumar C/rashiid isku dayayo sidii loo yareyn lahaa tahriibayaasha Soomaaliyeed ee u bareeraya khatarta.
← Africans are Lazy Fools, Only Good at Lovemaking and Thuggery – Donald Trump → Xildhibaan Maxamed Axmed Gurxan oo u geeriyooday dhaawacyo ka soo gaaray weerar lagu qaaday saaka